Wararka Maanta: Sabti, Sept 8 , 2012-Xukuumadda Itoobiya oo sheegtay inay Wadahadallo nabadeed la yeelatay Jabhadda Xoreynta Ogaadeeniya ee ONLF
Afhayeenku wuxuu sheegay in wadahadallada ay ka dhaceen magaalada Nariobi ee xarunta dalka Kenya, sidoo kale ONLF ay ku sheegtay shabakad wararka u baahisa in wadahadallo ay la yeelatay saraakiiil ka socday xukuumadda Addis Ababa.
"Waa tallaabo wanaagsan horay loo qaaday... waxaana raacaynaa qodobbadii lagu gaaray heshiiska k illaa laga gaarayo dhammaadka wadahadallada. Waxaana labada ay raaci doonaan qaanuunno ay ku heshiiyeen," ayuu yiri Simon oo suxufiyiinta kula hadlayay maanta magaalada Addis Ababa.
Wadahadalladan ayaa waxay soo afjarayaan dagaallo 28-sano u dhexeeya Itoobiya iyo jabhadda ONLF, kuwaasoo ay ku dhinteen kumannaan qof oo isugu jiray askar iyo dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Jabhadda ONLF ayaa waxaa la dhisay sannadkii 1984-kii waxaana tan iyo xilligaas ay dagaallo kula jirtay xukuumadihii isaga dambeeyay Itoobiya. Bishii Abriil sannadkii 2007 ayay xoogagga ONLF weerareen goob ay shirkad Shiinaha laga leeyahay ka baaraysay shidaal, halkaasoo ay ku dileen 76 ruux oo sagaal ka mid ah Shiineys ahaayeen iyo 65 ka mid ah ciidamada Itoobiya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee ONLF Cabdiraxmaan Mahdi ayaa sheegay in dhowr jeer ay heshiis kula galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Siraj Fergasa wadahadallo ay fududeynaysay xukuumadda Kenya.
Afhayeenka Itoobiya, wuxuu sheegay in wadahadalladan billowday ay dhabaha u xaarayaan nabad ka dhalata Itoobiya oo dhan, isagoo sheegay in wadahadalladan ay sii socon doonaan illaa dhammaadka laga gaarayo.
Garab ka mid ah ONLF ayay xukuumadda Itoobiya heshiis nabadeed la gashay bishii Oktoobar ee sannadkii 2010, kuwaasoo garabka hadallada wadahadallada la furay Itoobiya ay si adag uga soo horjeesteen.
Wadahadalladan u furmay xukuumadda Itoobiya iyo jabahadda ONLF ayaa waxay kusoo beegmayaa iyadoo toddobaadkii hore la aasay ra'iisul wasaarihii Itoobiya soo xukumayay laabtankii sano ee ugu dambeysay, kaasoo dagaal daga kula jirtay ONLF iyo jabahadaha kale ee ka jira dalka Itoobiya.